Mogadishu Journal » European Super League: Waxaan tan u sameyneynaa inaan badbaadino kubada cagta, ayuu yiri Florentino Perez
Florentino Perez ayaa ku adkeysanaya in ujeedka koowaad ee European Super League uu yahay in la “badbaadiyo kubada cagta” kadib markii tartankan kala go’a uu ku yimid dhaleeceyn aan kala joogsi laheyn iyo cunno weyn 24 saac kadib markii lagu dhawaaqay.
Super League ayaa soo bandhigtay degelkiisa tartanka galabnimadii Axada kadib maalin la isla dhexmarayay, iyadoo Perez loo magacaabay gudoomiyaha tartanka cusub.
Madrid, kooxaha waa weyn ee LaLiga ee Barcelona iyo Atletico Madrid, Premier League 'lixda ugu weyn' - Manchester United, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Tottenham iyo Arsenal - iyo Juventus, Milan iyo Inter ayaa dhammaantood ku jira guddiga, iyadoo xubnihii aasaasay ay ka faa'iideysan doonaan dabeyl bilow ah oo gaareysa b 3.5billion.
Si kastaba ha noqotee, Perez wuxuu u sheegay El Chiringuito TV inuu dareemay inay jiraan hadafyo ka sareeya ciyaarta marka loo eego hunguriga kaliya.
“Kooxaha ugu waa weyn England, Italy iyo Spain waxay xal u heleen xaalada aad u adag ee kubada cagta ay soo food saartay,” ayuu yiri.
“Real Madrid labo xilli ciyaareed gudahood waxaa laga lumiyay € 400m waana mida kaliya Real Madrid. Markaad kaliya dakhli ka hesho telefishanka, waxaad fahantay xalka inuu yahay inaad sameysid ciyaaro tartan badan oo soo jiidasho leh oo aduunka oo dhan laga arki karo.
“Waxaan go’aansanay, bartamihii isbuuca, halkii Champions League aan heli laheyn Super League oo kulamo badan la ciyaari doona
Kubadda cagta waa inay horumartaa. Xiisaddii way luminaysaa. Waa inaan ka fikirnaa sababta ay carruurta da'doodu u dhaxeyso 16-24 jir ay xiisaha u luminayaan.
“Waa inaan ka dhignaa mid soo jiidasho leh, maahan wax taajir ah, waxaan tan u sameyneynaa inaan badbaadino kubada cagta.”
Perez ayaa diiday dhaleeceynta ah in horyaalku uu abuurayo dukaan xiran, taas oo ay ugu wacan tahay ujeedada ah in loo ogolaado shan kooxood inay soo galaan "isboorti isboorti" oo ay keenaan wadarta tartamayaasha ilaa 20, oo ay la socdaan 15 naadi oo aasaasay.
Sidoo kale wax walwal ah kama qabin Madrid, kooxda ay xafiiltamaan ee Chelsea iyo kooxda kale ee semi-finalka la ciyaareysa ee City laga saaray Champions League xilli ciyaareedkan, sidoo kale UEFA iyo FIFA ma mamnuucayaan ciyaartoyda Super League inay ka qeyb galaan tartamada caalamiga ah.
Ciyaaryahan kasta wuu xasilloonaan karaa maxaa yeelay taasi ma dhici doonto, ”ayuu yiri.
“Real Madrid lagama saari doono Champions League. Nor City, iyo cid kale toona.
"Ma dhaceyso. Ma doonayo inaan galo sababaha sharciga laakiin ma dhici doonto. Sharci ahaan waa wax aan macquul aheyn."
Inkasta oo cadaawada taariikhiga ah ee udhaxeysa Madrid iyo Barcelona, ​​Perez uu sheegay inay fududahay in lagu qanciyo madaxwaynaha dhawaan la doortay ee Camp Nou Joan Laporta inuu kaqaybqaato mashruucan.
Wuxuu intaa ku daray: "Ciyaaraha dhexmara kooxaha waa weyn waa kuwa ugu soo jiidashada badan, waxay soo saaraan lacagta ugu badan. Uma maleynayo in kuwa yar yar ay yihiin kuwa soo jiidasho leh.
"Waxaa jira tartamo qaran oo aysan dadku xitaa aqoon magaca. Kubada cagta sida ay tahay ma sii socon karto."